१११ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस बैतडीका स्थानिय तहले पनी धुमधाम सँग मनाए !! | सुदुरपश्चिम खबर
१११ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस बैतडीका स्थानिय तहले पनी धुमधाम सँग मनाए !!
बैतडी– ( हिजो) मार्च ८ तारिख, १ सय ११ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस बैतडीका स्थानिय तहहरुले पनी बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन । “महिलाहरुको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समृद्ध नेपालको आधार” भन्ने नाराका साथ यो बर्षको अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाईएको हो । महिला दीदी बहिनी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुको सक्रिय सहभागीतामा यहाँका स्थानिय तहले दिवस मनाएका हुन ।
दिवसको अबसरमा जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकाले बिभिन्न माबि तहका छात्राहरुको सहभागीतामा नगर स्तरिय बक्तित्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ । यस्तै आज दिवसको अबसरमा पुर्चौडी नगरपालिका, पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ मा र सदरमुकाम गोठलापनीमा महिला अधिकारको बिषयमा देउडा प्रतियोगिता समेत आयोजना गरिएको थियो ।
देउडा मार्फत महिलाहरुले महिला भएकै कारण आफुहरुले भोग्नु परेका पिडाहरु पस्किएका छन ।जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनी र्यालीसंगै बिभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु गरी दिवस मनाएको गाउँपालकाकी उपाध्यक्ष बिना भट्टले जानकारी दिनुभएको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकाले पनी औपचारिक रुपमै कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्बती कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै जिल्लाका अन्य स्थानिय तहहरुले पनी दिवस मनाएको जानकारी दिएका छन ।
महिलाहरुले राज्यको हरेक निकायमा प्रतिशतका आधारमा सहभागिता हुनपर्ने माग गरेका छन् । संविधानमा लेखिएका मौलिक हक र अधिकारहरु पूर्ण कार्यान्वयनमा नजानु दुखद भएको भन्दै हरेक निकायमा महिलाहरुको प्रतिशतका आधारमा सहभागिता हुनुपर्ने बताएका छन । राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर अहिलेपनि पालना हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीले बताउनुभयो । महिलाहरुको क्षमता विकास गरेर हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि राज्यले फरक खालको निति ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिएकी छन ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । साथै सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ । तराइका जिल्लामा केहि कार्यान्वयन भएपनि पहाडि जिल्लाहरुमा यो कार्यान्वयन हुन सकेको शिबनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुस्मा चन्दले बताउनुभयो । पितृसत्तात्मक, विचार, संकिर्ण सोचका कारणनै महिलाहरुको पुरुष जसरी नै सम्पत्तीमा समान हक हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
( रेडियो बैतडीबाट साभार)
अत्तरियामा शिवरात्रीको अवसरमा बृहत सांकृतिक कार्यक्रम हुदै
माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक बस्दै